Vonoan’olona teny Sabotsy Namehana : vehivavy hita faty nokendaina tao an-tranony | NewsMada
Vonoan’olona teny Sabotsy Namehana : vehivavy hita faty nokendaina tao an-tranony
Eo am-panaovana fanadihadiana ny zandary amin’izao fotoana izao, saingy miantefa amin-drangahy vadiny sahady ny ahiahy ho nahavanon-doza namono ity ramatoa iray, hita faty omaly, tao an-tranony, eny Soaniadanana, Sabotsy Namehana ity.
Nampihoron-koditra! Hita faty tao an-tranony teny amin’ny fokontany Soaniadanana Sabotsy Namehana, omaly ny renim-pianakaviana iray. Novonoina tamin’ny fomba feno habibiana ity renim-pianakaviana manodidina ny 28 taona eo ho eo ity raha ny fahitana azy teny an-toerana. Nokendaina izy. Efa simba ny razana satria efa mangana sady nibontsina ny vantany iray manontolo. Tsy misy namantarana azy intsony ny lohany noho ny fahasimban’ny razana. Araka ny fampitam-baovao avy amin’ny zandary, mpiara-miasa amin’ilay vehivavy nitady azy tao an-tranony no nahita ny razana. Nahenoana fofona maimbo rahateo teo amin’ny manodidina ny tranony. Tokony ho niasa izy tamin’ny zoma lasa teo, saingy tsy tonga tany am-piasana ka nampiahiahy ilay mpiara-miasa aminy ka tonga nitsidika azy teny an-tranony, kanjo ny fatiny no hita nivalampatra teo am-pandriana, raha ny fanazavan’ilay mpiara-miasa aminy tamin’ny alalan’ny tatitra nampitain’ny zandary. Manofa trano ary manambady aman-janaka ity renim-pianakaviana niharam-boina ity. Mipetraka eo akaikin’ny tranon’izy ireo ihany ny tompon-tranony. Araka ny fanazavana voaray hatrany, niala tao an-trano ny vadiny sy ny zanany, ny zoma teo ary nanatitra ny fanalahidin’ny trano tao amin’ny tompon-trano.
Efa fanaon’izy ireo rahateo ny mametraka ny fanalahidy ao amin’ny tompon-trano ka izay tonga aloha amin’izy mivady no maka izany. Tsy nisy naka mihitsy anefa ny fanalahidin’ny trano tamin’io fotoana io ka hatramin’ny omaly.
Ahina ho tompon’antoka tamin’ity vonoan’olona ity ny vadiny…
Tsy nanampo na inona na inona momba ny fisian’ilay renim-pianakaviana hita faty rahateo ny tompon-trano raha tsy omaly tamin’ny alalan’ny mpiara-miasa amin’ilay renim-pianakaviana niharam-boina. Hatramin’ny omaly, tsy hita popoka nandalo teny an-tanàna sy/na naka ny fanalahidin’ny trano tao amin’ny tompon-trano ilay vadiny.
Tonga nanao fanadihadiana ity vonoan’olona mahatsiravina ity, ny zandarimaria ao an-toerana, ny ben’ny Tanàna, ny dokotera miasa ao amin’ny CSB II Sabotsy Namehana.
Araka ny fanadihadiana savaranonando momba ity vonoan’olona ity, ahina ho tompon’antoka sy ambadik’izao fahafatesan’ity renim-pianakaviana ity ny vadiny. Manamafy izany rahateo ny mpiara-monina amin’izy ireo fa matetika misy disadisa momba ny tokantrano izy mivady ireto ka ahina ho misy ifandraisany amin’izany izao vonoan’olona feno habibiana izao. Ny valin’ny fanadihadiana ataon’ny zandary ho hahafantarana ny marina rehetra momba izany.